Xisbiyada Somaliland waxaa Maaxdumiyey Bar-Bar ka fuul iyo Badhax-tire isla shuraakoobay . Qalinkii A/rahman Fidhinle | Berberanews.com
Home WARARKA Xisbiyada Somaliland waxaa Maaxdumiyey Bar-Bar ka fuul iyo Badhax-tire isla shuraakoobay ....
Xisbiyada Somaliland waxaa Maaxdumiyey Bar-Bar ka fuul iyo Badhax-tire isla shuraakoobay . Qalinkii A/rahman Fidhinle
Dimuqaadiyada Somaliland waxay u baahan tahay Xisbiyo dhisan oo waari kara. Xisbiyada Somaliland waxay wada noqdeen qaar ka shidaal qaata beelo, beelwalibana waxay niyada kala socotaa Xisbi gaar ah.Geedigii lagaga guuraayey hab beeleedka ee aynu u dooranay habka xisbiyada badan waxay mujtamaca reer Somaliland u hayd guul wanaagsan oo rajo soo muujisay, laakiin hada weli xaalku wuxuu ku danbeeyey waa markayagii ee na taageera.Marka golaha dhexe ee xisbiyadu aaney noqon gole daneed ee ay shir gudoonadoodu ku hawlgalaan sife cadaalad ah oo dhex-dhexaadnimo iyo daacadnimo ah ee ajandeyaashooda laysla falkiyo ee laysla tuujiyo,lagana doodo ee la iska qanciyo ayaa gole dhexe gole dhexe oo dhex-dhexaad ah noqonayaa oo maxsuul mideysani ka soo baxayaa xisbiyaduna Xisbiyo qaran oo lagu dhiirado noqonayaan.
Marka la helo cadaalad iyo sinaan ee beeluhu ay qariyaan hadafka cad ee beelaysan ee cadaanka ah ee ay la soo ligan yihiin ee xisbiyada dhexdooda ayaa Xisbiyada lagu dhiiranayaa. Marka dimuqraadiyadu ay inoo rinto ee lagaga dhaqmo xisbiyada dhexdooda ayaa Somaliland la bad-baadin karaa oo guulaha la higsanaayo la gaadhi karaa. Marka la isku raaco hogaamiyaha ina gaadhsiin kara horumar dhaqaale iyo mid bulsho ee dabar iyo shakaal layskaga xidho hogaamiyaha aan laheyn higsiga, hanka iyo hogo tusaaleynta ee kuwa bar-bar ka fuulka iyo badhax-tirka ah layska xakameeyo ayaa xisbigu xisbi qaran noqonayaa oo hogaamiye ummadda hagaa ka soo dhex baxayaa.
Marka danta guud la isugu yimaado ee danta gaarka ah meel la iska dhigo ayaa ummaddi ummad noqotaa oo wax wada qabsataa. Marka xisbiyadu ay shacabku yeeshaan ee laga ilbaxo beeshaas ayaa gudoomiyaha leh beeshaasina musharaxa ayey yeelaneysaa ayaa Somaliland la wada yeelanayaa. Marka xisbiyadu ay la yimaadaan aragti siyaasadeed oo fog oo aan ka aheyn in xisbiga kursiga lagu fuulo kadibna guri cas iyo gabaahiir lagaga guuro ayaa Somaliland mustaqbal Dimuqraadi u soo ifayaa. Marka taageerayaasha xisbiyadu min faqiir ilaa taajir,mid xil haya iyo mid aan hayn ay iswada registergareeyaan ee kadhka xisbiga wada qaataan ee ay dhexdooda si xor ah oo xalaal ah isaga doortaan hogaamiyahooda ayaa xisbi xisbi qaran noqonayaa. Marka ay xisbiyadu yeeshaan shuruuc adag oo ay ilaaliyaan ayaa khilaafka xisbiyadu yaraanayaan.
Bal kawarama Mashruuca Khilaafka hadheeyey Xisbiga ucid, Waxaa xisbigaasi khilaafkii dhexdooda uu ku dhameysan waayey xigmad siyaasadeed iy xeer-beegtinimo salka ku haysa dhaqankeenii soo jireenka ahaa.Hadii mabd’a la wada yeelan waayo oo wax la wadaagi kari waayo waxaa wanaagsan in wax laka yeesho.
Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Ali waraabe wuxuu baabiiyey xisbiga hamigiisii, higsigiisii, horumarkiisii iyo Hayaankiisii, waxay aheyd in uu Faysal kala garto shalay iyo maaanta oo aanu naftiisa ku maaweelin mashruuc male awaal ah iyo been aan dhaafsiisneyn muskiisa iyo miscirirtiisa.
Weli xisbiyada Somaliland dhexdooda waxaa hadheeyey keli talisnimo iyo nidaam ku dhisan amar ku taagleyn. Weli xisbiyada dhexdooda waxaa ka jira Siyaasad baleysinkeedu yahay ” kursiga qaado aan qaatee taa soo ku saleysan hab-dhaqan xulufaysan. Xisbiyada dhexdooda waa xaq-daro in laandheerayaashu anaa kaa ergo badan iyo anaa kaa kuraas badan ay ku beratamaan marka ay kuraastii ay rabeen ay helaana ay ku botoriyaan beelaha laga tirada badan yahay iyo dumarka hunguriga iyo indhaha ku quudaaya kuraas ay mudo isku labo rogaan.
Boowe! Waxaan idiinku soo garoocayaa maanta “Waar malaa Doorasho ma jirtee dabo dhahdu ma sanadbaa mise waa lix-bilood !! ” Arinku Waa Quud aan jirin Qoryo uguro” ! Anigu Daaha kama rogin ee dadkuba wuu arkaayaa !!
Previous articleUrurka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo Tobabar u furay Suxufiyiinta Gobolka Gabiley-Daawo
Next articleMacluumaad yaab leh oo ku Saabsan Madaxweynaha Dalka Filibiin